Mitsangàna miaraka amin'ny legioma misy steamed - Recipe Thermomix | ThermoRecipes
TRONDRO30 minitraOlona 4
Ity fomba fanamboarana hake ity miaraka amin'ny legioma nohamainina dia fanomanana tiako ho an'ny sakafo hariva. Ny trondro dia iray amin'ireo sakafo ankafiziko indrindra ary vita amin'ny varoma miaraka amin'ny legioma toa tsara sy maivana be.
Ity karazana fomba fahandro ity mahatalanjona izy ireo hikarakara ny tenany na ny fanaovana sakafo régime na fihenan-danja. Izy io koa dia mety ho an'ny olona voan'ny aretina celiac na gluten, atody ary tsy fahazakana lactose.
Afaka vita amin'ny trondro isan-karazany toy ny fofona perch, volamena, Bass, sns. Efa nanandrana izany aho tamin'ny famenoana hake sy perch ary tiako be izy ireo.
Haingam-pandeha ihany koa izy io, satria eo ho eo 30 minitra efa vonona ny lovia. Raha te-loaka io dia mila mametraka farafaran'ny legioma miaraka amin'ireo trondro eo amboniny fotsiny ianao. Manaova azy araka ny itiavanao azy ary, mba hanomezana an'io fikitika manokana io, dia ampio menaka virjina fanampiny amboniny ... ary manana lovia 10 vonona ianao!
1 Miara-miasa miaraka amin'ny legioma mahandro
Lovia feno sy mahasalama.
Famenoana hake 4 (ataontsika antoka fa mitovy ny hateviny)
Oregano 1 sotrokely
Divay amin'ny banky 50 g
½ kioban-kazo trondro
Ovy 1, voahopy ary tapatapahina ho silaka 0,5 cm
Zucchini 1, tsy voadio ary tapahina amin'ny silaka 0,5 cm
Tongolo 100 g nopetahana peratra manify
Voatabia 1 nendahana silaka manify
Borosio amin'ny fitoeran-diloilo ny varoma ary apetraho ny fonosana hake, aondraho sira, dipoavatra ary oregano. Manarona sy mitahiry izahay.
Napetrakay tao anaty vera ny menaka sy tongolo lay. Izahay dia manao fandaharana 5 segondra, hafainganam-pandeha 7 ary manendasa fandaharana izahay 5 minitra, maripana varoma, hafainganana 1.
Ampio ny rano, ny divay fotsy ary ny antsasaky ny takelaka fitahirizana trondro ao anaty vera. Apetrakay ao anaty harona ny legioma, ovy, zucchini, tongolo ary voatabia no anelanelana anay.
Mampiditra ny harona ao anaty vera izahay ary mametraka ny fitoeran-doko varoma amin'ny toerany. Izahay dia manao fandaharana 25 minitra, maripana varoma, hafainganana 1.
Amin'ny farany dia esorinay ny sobika ary apetrakay ao anaty lovia ny legioma, hamafazana sira ary apetraho eo amboniny ny trondro, hafafazo kely amin'ny ron-kena ary raha tianay dia ampiana menaka oliva virjiny fanampiny eo amboniny.
Manompo eo noho eo izahay
Fanazavana fanampiny - Fampiroboroboana ny ranomasina Gilthead miaraka amin'ny ravaka legioma / Baibolin'ny ranomasina misy sosy voatavo sy asparagus dia
Mitadiava fomba fahandro hafa momba ny: Celiac, Salady sy legioma, Tsotra, Tsy mahazaka laktose, Tsy mahazaka atody, Latsaky ny adiny 1, TRONDRO, fitondrana
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: thermorecipes » Resipeo thermomix » TRONDRO » Miara-miasa miaraka amin'ny legioma mahandro
Manankarena be nefa ambonin'izany rehetra izany, araky ny voalazanao tsara, tena mahasalama.
Izaho tsy mifoha, miaraka amin'ny salmon ohatra.
Izy io dia fomba fahandro tena mahasalama ary miaraka amin'ny salmon koa dia misoratra anarana, tena tiako io trondro io.
Sil, matsiro tokoa! hevitra iray hafa, mora sy mahasalama. Tiako!
Isan'andro tiako ny resipeo omenao ahy, misaotra betsaka
Faly aho fa tianao izy ireo, Mari.
Omaly alina aho no nanao ny fomba fahandro ary vonona ao anatin'ny 30 minitra daholo izany. Etsy an-danin'izany, holazaiko aminao ny nataoko. Raha tokony apetraka ny legioma manontolo, ho an'ny ankizy, rehefa avy nandrahoina dia napetrako tao anaty lovia miaraka amin'ny fotsifotsy ny ovy, ary teo amboniny dia napetrako niaraka tamin'ny ron-kena ireo legioma nopotehina ary nivoaka saosy matsiro. Tsy fantatrao izay fahombiazana, ary koa malama sy matsiro. Tianay daholo izany-
Misaotra nandefa ahy io resipeo io.
Hevitra tsara izany, Adela! Handramako ny legioma araka ny nanamboaranao azy, satria tsy maintsy matsiro izy ireo.
Misaotra betsaka anao nahita anay. Mirary ny soa indrindra.
SAYAKHA dia hoy izy:
Salama, manaraka anao foana aho fa hatramin'izao dia mbola tsy nanoratra na inona na inona aho, mipetraka any Miami aho fa avy any Madrid.
Ny zanako lahy 3 taona dia manana sakafo tsy misy gluten manokana ary tsy misy casein ary mihinana zavatra samihafa avy amintsika foana izy omaly, nipetraka teo ambony latabatra daholo izahay ary sambany no afaka nihinana ny menio feno ho an'ny rehetra, mazava ho azy ho azy ihany ny ovy sy trondro satria tongolo sy ny sisa tsy misy olona hampaninana azy.
Tena manankarena, matsiro, tiako izy io, nataoko tamin'ny valahana Tilapia, izay trondro malaza eto ary tena matsiro.
Misaotra anao amin'ny resipeo rehetra, tsara izy ireo.
Valiny amin'i SAYAKHA
Sayakha, misaotra betsaka anao nahita anay lavitra (Miami). Faly aho fa tianao ny bilaoginay, amin'ny fampaherezana ataonareo dia manohy manohy manamboatra resipeo am-pitiavana ianareo Mirary ny soa indrindra.
Tovovavy lavorary ary feno fankasitrahana tokoa satria takiko ireo fomba fahandro ireo ho an'ny sakafo, fihinan-tànana lehibe avy any Mexico ...
Isabel, misaotra anao tamin'ny fanarahana anay ary hanohy hamoaka fomba fahandro amin'ity karazana ity izay mahasalama ny rehetra izahay.
Faly aho fa tianao izany, Isabel. Miarahaba betsaka an'i Mexico ary misaotra betsaka anao nahita anay lavitra be. Ny namako tena tsara dia ao miasa hatramin'ny martsa 2011 ary faly izy.
isabel laris dia hoy izy:
Silvia sy Elena misaotra anao fa nandinika tsara ianao, ary i Elena dia miteny amin'ny namanao akaiky izay miasa eto Mexico fa raha mila zavatra izy satria lavitra ny taniny (omeo azy ny mailako) dia hifandray tsara izahay, arahaba !! !!
Valiny tamin'i Isabel Laris
Misaotra betsaka, Isabel. Holazaiko amin'ny namako, fa aza manahy fa tsara izy ary faly sy mifanena amin'ny olona mahafinaritra. Mirary ny soa indrindra.
Salama ahoana ny zavatra?
Omaly alina aho no nanao ity fomba fahandro ity ho an'ny sakafo hariva. Tianay izany. Tsy noheveriko ho matsiro be izany. Tena tian'ny vadiko izany.
Te hisaotra anao aho noho ny resipeonao satria ho an'ireo tsy manam-potoana betsaka dia mamaha ny fiainantsika izy ireo.
Misaotra betsaka, Maribel. Manantena aho fa hanohy mankafy ny fomba fahitanay. Famihinana.
jesus diego fleki dia hoy izy:
Salama aho nividy THERMO, ARY mahomby amin'ny fiadan-tena, ny fahasalamana ary ny fahasamihafana, omeko bebe kokoa noho ny vadiko, ary faly izy, mamaky ny blôginao aho ary faly dia faly aho fa ny olona avy amin'ny lafiny rehetra dia mirary soa anao, izaho koa Ho an'ireo sakafo haingana sy salama ary fisakafoanana izay homenao an'i FUERTEVENTURA dia fiarahabana mahery vaika ……
Valio i jesosy diego fleki
Misaotra betsaka, Jesosy. Faly be aho fa tianao ny bilaoginay. Am-pitiavana sy hafanam-po lehibe no anaovanay izany ary ny fahitana ny hevitrao dia mamporisika anay hanohy. Mirary ny soa indrindra.
Jesosy ô, misaotra tamin'ny teninao. Faly aho fa tianao ny fomba fahitanay ary manamora ny fahandroana sakafo, mahasalama sy tsotra, izany no anton'izany.
Tokony ho matsiro, tsy maintsy ataoko izany, ny vadiko dia tia trondro be dia be, efa nampiasa ny thermomix nandritra ny andro vitsivitsy ary mbola olom-baovao aho, te hahalala fomba fahandro bebe kokoa toa izao, misaotra.
Tongasoa, Juani!. Manantena aho fa tianao ity hake ity, dia fomba fahandro mahasalama nefa tena matsiro. Ao amin'ny Index Recipe dia antenaiko fa hahita iray tianao ianao ary hanohy hamoaka fomba fahandro amin'ity fomba ity izahay. Mirary ny soa indrindra.
Tiako ity fomba fahandro ity !!! Haingana, mahasalama ary feno tanteraka izy io.
Mahavariana ny ron-kena tavela, mahatonga ny trondro ho matsiro be ...
Misaotra betsaka anao nizara tamin'ireto fomba fahandro tena mahasoa ireto anay!
Cristina, miombon-kevitra aminao aho, ankoatry ny manankarena sy mahasalama dia manampy antsika hikarakara ny tenantsika izy. Misaotra betsaka anao nahita anay. Mirary ny soa indrindra.
Nanana ny Thermomix aho nandritra ny herinandro, fa isan'andro kosa dia faly kokoa aho ary hatramin'ny nahitako anao dia toy ny veterana manao sakafo aho. Faly ny fianakaviako. Koa satria mihinana sakafo ny vadiko dia tiako ireo karazana fomba fahandro ireo. Anio hariva aho dia gaga anao amin'ity iray ity. Andao hojerentsika raha hitako fa mahafinaritra toa anao io. Misaotra betsaka.
Tongasoa eto Carmen, faly aho fa mankafy ny fomba fahandronay. Mirary fety sambatra!
Manantena aho fa tianao izany, Carmen. Izy io dia fomba fahandro tena mahasalama sy maivana. Lazao aminay. Mirary ny soa indrindra.
Misaotra anao. Nivoaka matsiro. Fahombiazana tanteraka, ny zanako dia tsy namela na inona na inona teo ambony lovia ary koa ny vadiko. Androany aho dia sahy nanao mofomamy rahona ary rahampitso dia hataoko tsy misy siramamy ilay paoma paoma (tsy maintsy mitondra ny tsindrin-tsakafo amin'ny Noely aho). Holazaiko anao.
Nataoko tamin'ity herinandro lasa ity, ary tiako izany! Tsy nanana divay aho, ka napetrako ny antsasaky ny vera cava sotroiko, ary tsy nanao ron-kena kely koa, fa nasiako laoka legioma kely nataoko ... tsara ... tena tsara, tena mahasalama ary Haveriko antoka tokoa. Misaotra !!!!
Goodiiiiiisiiiiimo, aza mahita ny fomba nahombiazany tao an-trano. Nataoko tamin'ny bream sy salmon satria io no novidiko ary tao amin'ny biraom-pisaorana aho, misaotra anao.
NATTY dia hoy izy:
HI! Androany no fotoana voalohany nanoratako fa nataoko sary an-tsary sahady, LEHIBE !!!! ARY TSY MANADINO FA SADY AZY. MISAOTRA ANAO NANDROSO NY REHETRA REHETRA ARY HANOHANA AZO. FIARAHABANA.
Valiny amin'ny NATTY
Faly aho fa tena tianao ireo resipeo ireo, tiako ihany koa izy ireo noho ny fahasalamany.
Azoko atao ve ny mampiasa fonosana hake mangatsiaka?
Salama!! Tena tsara izany, vitako izay nolazain'i Adela momba ny fanotoana ny legioma (afa-tsy ny ovy) tamin'ny ron-kena ary… tena matsiro! Manoro hevitra azy aho. Oroka !!
Hotsapaiko izany, miaraka amin'ireo zanako vavy ireo legioma voatetika ho tena tsara.
Ny fahombiazana rehetra, tena matsiro, notorotoroiko koa ny legioma, ary ny famakafakana tsara, ny zanako lahy izay tsy dia tia trondro loatra, tiany izany, midika izany fa misaotra betsaka noho ireo resipeo ireo, oroka tena tsara sy tsotra.
Valiny tamin'i Anita
Faly aho fa ho tianareo ny fahamarinana fa ity fomba fahandro ity dia mety amin'ny sakafo hariva ara-pahasalamana sy maivana.
Salama! Omaly alina aho no nanao an'io, ary tiako ilay izy sy ny sipako!., Tena matsiro!., Misaotra betsaka an'ireo resinao ,!
Faly aho fa tianao izany, ao an-trano dia lovia iray izay omaniko betsaka. Mety ho an'ny sakafo hariva maivana izany.
Nanandrana ny fomba fahandro aho tamin'ny andro lasa izay. Ny hany zavatra hoe satria mihinana sakafo aho ary tsy afaka manana divay na ovy fotsy, dia tsy nasiako divay ary nosoloako ilay ovy.
Ary avy eo, notorotoroiko ireo legioma ary nasiako mercluza, tsara.
Tsara loatra ka androany no averiko. Ny saosy tena tsara sy ny trondro, tsy misy tavy.
Salama, efa niaraka tamin'ny ankohonako kely aho ary faly; kamo loatra aho mieritreritra izay hohanina, ankehitriny tsy manana an'io olana io aho, nanao an'io fomba fahandro io fotsiny aho ary nivadika ho matsiro
aahhh ae adinoko ny milaza aminao fa nataoko tamin'ny voanjo mangatsiaka, ary mahafinaritra izany
Sargos Enchantress dia hoy izy:
Salama, ny antsasaky ny tsara indrindra amiko ary izao vao tonga eto amin'ity tontolon'ny thermo31 ity (fanomezana mpanjaka avy amin'ny ray aman-drenin'izy ireo). Ary tiako ny milaza aminao fa nahafaly ahy ny nahita ny bilaoginao. Mpanarato ara-panatanjahantena aho ary hodinihinay ireo trondro t31, ka amin'izao fotoana izao dia hanandrana ity fomba fahandro ity isika, raha tsy izany dia hosoloantsika trondro dia ny hazandrano: ranomasina, ranomasina, ary ranomasina. Holazaiko aminao ny fomba fivoahan'izy ireo. Etsy an-danin'izany, misaotra betsaka tamin'ny asanao sy ny fizarana amin'ny hafa ny resinao momba ny T31
Valiny tamin'i Sargos Enchantress
Tiako ny resipeo, saingy manana olana aho, irery aho ary sahirana be foana amin'ny fampifanarahana ny fomba fahandro ho an'ny olona, ​​tiako ho anao ny mametraka resipeo bebe kokoa ho an'ny olona miaina irery
Raha mametraka ny teny hoe "single" ao amin'ny motera fikarohana ianao dia hahazo fomba fanamboarana natao manokana ho anao izay miaina irery ary tia ny Thermomix toy ny antsika mianakavy.
Fantatro fa vitsy izy ireo nefa tsikelikely dia handroso bebe kokoa isika !!
Milatekila dia hoy izy:
Tena tsara. Nasiako artichoke vaovao tao ary matsiro izy ireo. Misaotra ny fizarana
Valiny amin'i Milatekila
Faly izahay fa tianao izany !!
Cool! Tonga amin'ny vanim-potoana isika izao ka tokony araraotinao izy ireo 😉
Cleopatra dia hoy izy:
Tsara ny divay fotsy afaka manolo azy amin'ny voasarimakirana ??
Valiny tamin'i Cleopatra
Salama Cleopatra, manoro anao aho hanolo azy rano 40 g sy vinaigre 10 g na raha mila voasarimakirana ianao. Azonao atao ihany koa ny manolo azy amin'ny rano 30 g lager + 20 g, na dia hiova kely aza ny tsiro fa hiasa tsara azo antoka. Misaotra nanoratra taminay!
Fanosotra gilasy misy leggasy karamel
Voanjo Salmon sy Pappardelle voanjo miaraka amin'ny voanjo amin'ny saosy voasarimakirana